TNLA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မိုင်းဘုန်းကျော်ကို မေးမြန်းချက်
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခပ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ အတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အားလုံးကို အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုပါဝင်ခွင့်ပေး ရမယ်လို့ ပန်ဆန်းညီလာခံကနေ မနေ့က တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို အဖွဲ့အားလုံးတက်ရောက်နိုင်ဖို့နဲ့၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အားလုံးကို အသိအမှတ်ပြုမှသာ အပစ်ရပ်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးနိုင်မယ်လို့ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်း တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ် TNLA ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေး မှူး မိုင်းဘုန်းကျော်က RFA ကိုပြောပါတယ်။
"အဓိက ထူးထူးခြားခြား ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို စုစုစည်းစည်းနဲ့ အတူသွားကြဖို့ သဘောထားချတယ်၊ ပြီးတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခပ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုရင် ကိုးကန့်တို့ AA တို့ စသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ အကုန်လုံးပါဝင်ခွင့်ရတယ် ဆိုရင် အကုန်လုံးတစုတစည်းနဲ့ ပါဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားတွေ ကျနော်တို့ချပါတယ်၊ ပြီးတော့ တခြား သဘောတူညီချက်တွေ ကျနော်တို့ရထားတာရှိတော့ တကယ်လို့လိုအပ်လို့ ထပ်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ UWSA ဝ အဖွဲ့က ကမကထပြုပြီးတော့ ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေထပ်ခေါ်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းတွေ လက်တွေ့ဆောင်ရွက် သွားမယ်ဆိုတဲ့ အဓိကအချက်တွေ ကျနော်တို့သဘောတူပါတယ်"
ဒါ့အပြင် ကချင်၊ တအာင်း၊ ကိုးကန့်နဲ့ ရခိုင်ဒေသတွေမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ထိုးစစ်တွေရပ်စဲဖို့၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးတွေရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့၊ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ကြီးကြပ်ပေးဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုကြပါတယ်။
စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ပြီး ဒေသခံပြည်သူတွေကို နှိပ်စက် ညှင်းပမ်းနေတာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းလည်း မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ ပန်ဆန်းကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြ ထားပါတယ်။ ၆ ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ ပန်ဆန်းညီလာခံကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ် ၆၅ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ညီလာခံကို ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP ၊ ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDAA တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ် TNLA ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မိုင်းဘုန်းကျော်ကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုနေရိန်ကျော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
All so called officials are working for theirselves, not for public. We people are always heel by them. They are doing bullshit.
သတင်းအမှန် ပိတ်ဆို့မှု အတွက် စြက်ာဝဠာမှတောင်းခံ၍ ရသောကတ်ဘေးများမှာ ၁-မုန်တိုငိး ၂-ငလျင် ၃-မိုးခေါင် ၄-စါးဖားတွေကျော်စားသွားမှာ စိုး၍ ဆက်မရေးတော့ဘူး
May 15, 2015 09:34 PM
အလှမ်းကျယ် အလယ်လှပ် အောက်ခြေမခိုင် အောက်ချေကလူပါးဝ အပေါ်ကမသိ အပေါ်ကစားဖါး အောက်ကနားမလယ်
မမှန်ကန်သော အမှောင်ဖုံးသော မြေကြီးသားများ စြက်ာဝဠာ၏ တရားစီရင်ခြင်းသာ ဤလောကနှင့်တန်၏ စက်သွယ်ရေးလောကသည် လူမျက်စိနှင့်သွားကြည့်၍ မပြသော ကြားဖြတ်ပိတဆို့ထားမှုများ အမှန်တကယ်ရှိသောကြောင့် အဘယ်မှာလွတ်လပ်မှုရှိသနည်း
May 15, 2015 08:49 PM